Markuu ardaygu jeclaado macalimaddiisa – si uu u guursado. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Markuu ardaygu jeclaado macalimaddiisa – si uu u guursado.
Beijing (Radiohimilo) – Badi xiriir dhex-mara labo qofood oo jaceyl iska doonaya ma noqdaan kuwo la qaayibo ama la qariibsado. Balse dhadhan sidee ah ayuu kuu yeeshaa jaceylku marka lamaanahan aad jeclaatay uu noqdo ama ay noqoto qof barahaada ah – da’na kaa weyn muuqaal ahaan?!
Next: 10-faa’iidood: Doorka waayeelladu ku leeyihiin nolosha da’yarta